» हेटौंडा अस्पतालका चिकित्सकको मनोमानी कहिलेसम्म ?
कारवाहीमा परेका डा. अन्सारी अझै उस्तै
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १२:१३
मकवानपुर । मकवानपुरको एकमात्र सरकारी अस्पताल हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु ड्युटि सकिनु अगावै निजी क्लिनिक जाने गरेको पाइएको छ । बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म अस्पतालमै बस्नुपर्ने डाक्टरहरु ड्युटि समय सकिनु अगावै अस्पतालबाट निस्किएर निजी क्लिनिक धाउने गरेको पाइएको हो ।
सरकारी अस्पतालमा आउने विरामीको वेवास्ता गर्दै डाक्टरहरु ३ बज्नु भन्दा अगाडि नै निजी क्लिनिक पुग्ने गरेपछि अस्पतालमा आउने विरामीहरु निराश भएका छन् ।
हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत सर्जन डा. साजिद अन्सारी मंगलबार (हिजो) दिउँसो २ बजेर ३० मिनेट जाँदा अस्पतालबाट निस्किए । पैदल निस्किएका डा. अन्सारी अस्पतालबाट नजिक रहेको नेपाल सर्जिकल क्लिनिकमा ५ मिनेटमै पुगे । नवुयगको टोली उनलाई पछ्याउँदै हेटौंडा–१ स्थित नेपाल सर्जिकल क्लिनिकमा पुग्यो ।
‘ ड्युटी समय नसकिँदै किन क्लिनिक आउनु भएको ’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘ यता इमर्जेन्सी भएर ’। क्लिनिकमा इमर्जेन्सी केस भएकाले आएको उनले बताए । तर, हामीले देख्दा त्यहाँ कुनै त्यस्तो इमर्जेन्सी विरामी भने थिएनन् ।
डा. अन्सारीलाई अस्पतालबाट यसअघि पनि कारवाही गरिएको हेटौंडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. प्रवीण श्रेष्ठले जानकारी दिए । पहिला पनि यस्तै लापरवाही गरेका कारण उनलाई सस्पेन्ड गरिएको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मलाई सबै थाहा छः अध्यक्ष पौडेल
हामीले अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु २ बजेदेखि नै अस्पतालबाट निस्किएको विषय अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल समक्ष राख्दा आफुलाई डाक्टरहरुको सबै कुरा थाहा भएको बताए । अस्पतालबाट २ बजेदेखि नै निस्किएर निजी क्लिनिकमा त्यहाँका डाक्टरहरु धाउने कुरा आफुलाई कण्ठै भएको उनले बताए । अस्पतालले डाक्टरहरुलाई बेलाबेलामा चेतावनी दिँदै कारवाही समेत गरेको उनले बताए । डाक्टरहरुलाई अझै पनि कारवाही गरिने उनले दाबी गरे ।
डा. अन्सारी त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । त्यसरी अस्पतालबाट ड्युटी समयमै निजी क्लिनिकमा धेरै डाक्टरहरु निस्कन्छन् । डाक्टरहरु निजी क्लिनिकमै व्यस्त हुँदा सरकारी अस्पतालमा आएका विरामीहरुले दुःख पाइरहेको विषयबारे सबै जानकार हुँदा पनि डाक्टरहरु क्लिनिक धाउने क्रम भने रोकिएको छैन् ।